izitolo eziningi futhi izitolo ziye zaba ingxenye ebalulekile ngempela Guangzhou. Ukuthenga lapha kwakuqala ukwanda yokuthi ngisho abahambi ebona ngezinye izikhathi okunzima ukuyiqonda ukuhlukahluka izimpahla kanye boutiques. Ukuze hhayi ukuchitha ingxenye enkulu yezitolo uhambo ngesikhathi sabo, kungcono ukuqasha inkombandlela abanolwazi abazokutshela lapho inzuzo ukuthenga lokhu noma ukuthi umkhiqizo. Nokho, izindleko Umhlahlandlela kungaholela inani sasivumela bahlonipheke futhi uma engakhulumi ngolimi lwakho lwendabuko, kuyodingeka ukuqasha ngaphezulu, futhi labahumushi eqolo. Ngenxa yalesi sizathu, kufanele ucabange kusengaphambili mayelana nendlela ethenga e Guangzhou akaphendukanga ku inkinga eyodwa okuqhubekayo. Kuze kube yimanje, izinkampani eziningi zokuhamba ukunikela ukukhetha elinye lamalungu abasebenzi okungukuthi amasevisi azofakwa Kubiza semvume.
Ngakho, ukuyothenga eChina kusekelwe lezi zinhlobo ezilandelayo ezitolo:
izikhungo kwezimpahla angaphandle;
wendawo izitolo zokuthenga nezimakethe.
Lo muzi inesici kakhulu: uthole kalula izimpahla kwanoma iyiphi izinga kuphi Guangzhou. Ukuthenga kuba kujabulise nakakhulu uma ungenalo ukuhamba kulo lonke idolobha beyofuna umkhiqizo kwesokudla. E Guangzhou, ungathenga njengoba imikhiqizo bangempela uphawu, futhi umfuziselo uyakufanelekela kakhulu, uma kungekhona ngokungagwegwesi mbumbulu ezishibhile. Kulomuzi kukhona umkhiqizo isikhwama kwanoma iyiphi ukujiya!
Uma ungenayo imali kwimikhiqizo esinegama, kungcono ukuya emakethe yamasheya. Ukuze uthole ukuthi kulula ngokwanele ukubiza itekisi noma iya phansi esitimeleni, kodwa ukuze sigweme izingozi eziningi bezinye izizwe, nakanjani kudingeka isiqondiso.
Stock market - a eziyinkimbinkimbi zezakhiwo, okhandwe ngesando tinhlobo letehlukene izingubo nezicathulo, nge wokwakha ngamunye ukudayiswa uhlobo oluthile umkhiqizo, ngakho akudingeki ukuba uthole lonke emakethe ukuthola, isibonelo, izicathulo ezintsha, ngoba zonke izicathulo ithengiswe egumbini elilodwa.
Esinye imininingwane ebalulekile okufanele sicabange ngayo, kusukela ngo-Guangzhou katabatic yezitolo emakethe kungenzeka kuphela uma une kwesigidi yuan, kungekho amakhadi noma nabathengisi abayamukeli zamadola.
Uma ufuna insini ke sizungeze eziyinxanxathela zendawo ukubheka Chinese Uphawu Office. Yiqiniso, phakathi kwabo kukhona brand ngempela ehloniphekile ezikhiqiza eliphezulu futhi izingubo ezisesitayeleni, kodwa amagama boutiques namalogo yabo kuhle hlekisa ngisho ababeyizazi brand yomthengi. Njengoba intengo izingubo, bona ngokuphelele musa ihluke European futhi isiRashiya, kodwa izinga umkhiqizo kungenzeka ku-oda ngezansi. Ukuya ethenga zezitolo, engalindele wonge imali, le njongo kukhona izimakethe stock, ngakho unquma ukuthi ukugcina yinye - isikhwama noma impumuzo.
travel ejensi Ziningi hhayi ngaphandle isizathu ebizwa ngokuthi uhambo Guangzhou uhambo yezitolo. Nokho, ungalilahli tune libe isikhathi esihle esimweni esikhululekile. Amazinga ingaphansi 40 ehlobo futhi eningi abantu sihamba azungeze umuzi cishe ubusuku nemini - kukhona bokwenza eyinhloko Guangzhou. Ukuthenga kulezizimo kuzodinga ukuthi lokuhlushwa esiphezulu kanye ukuchayeka engakaze ibonwe, ngakho ngaphambi uya okuthiwa yezitolo hambo, izikhathi ezimbalwa ucabanga, ukuthi umdlalo kuwufanele ikhandlela.
Indaba efingqiwe: "Sunrise Zawo Zangaphambili". Talent - kuwumsebenzi, siphindwe umcabango